Hwɛ Yiye na Wɔannaadaa Wo
Ɔwɛn-Aban | October 2010
KENKAN WƆ Albanian Amharic Arabic Bulgarian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kikongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maya Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese
DON QUIXOTE yɛ din a Spaniani nhoma kyerɛwfo Miguel de Cervantes a ɔtenaa ase wɔ afeha a ɛto so 16 no mu no de frɛɛ onipa bi a wantena ase a ɔkaa ne ho asɛm wɔ n’ayɛsɛm nhoma a agye din no mu. Saa din no ara na ɛda nhoma no so. Wɔ saa ayɛsɛm nhoma no mu no, Don Quixote de ayɛsɛm mu akofo akokodurufo a wɔhyehyɛ akotade hyɛnhyɛn bi a wɔrekogye mmabaa bi a wɔwɔ ahokyere mu ho asɛm hyɛɛ n’adwenem mã. Ankyɛ na ɔno nso fii ase gye dii sɛ ɔyɛ ɔkofo onuonyamfo. Wɔ asɛm no biako a agye din mu no, ɔkɔtow hyɛɛ mfiri bi a osusuwii sɛ ɛyɛ abran kuw bi a wɔn ho yɛ hu so. Ogye dii sɛ ɔrekunkum saa abran no de asom Onyankopɔn, nanso n’anim guu ase pɔtɔɔ.
Ɛwom sɛ Don Quixote ho asɛm no yɛ ayɛsɛm kɛkɛ de, nanso ɛyɛ aniberesɛm sɛ wɔbɛdaadaa wo. Sɛ nhwɛso no, susuw ɔsadweam bi a ogye di sɛ obetumi anom nsa dodow biara a ɔpɛ nanso na ɔresɛe n’akwahosan ne n’abusua asetena no ho hwɛ. Anaasɛ susuw obi a ɔmpɛ sɛ odidi a osusuw sɛ ɔwɔ ahoɔden nanso ɔrekyen ne ho kɔm na ɔkɔm rekum no nkakrankakra no ho hwɛ.
So wobetumi adaadaa yɛn mu biara? Awerɛhosɛm ne sɛ, mmuae no yɛ yiw. Nokwasɛm ne sɛ asɛm a ɛte saa betumi ato yɛn nyinaa. Nea ɛka ho ne sɛ ebetumi aba sɛ wɔbɛdaadaa yɛn wɔ yɛn gyidi ahorow a yɛn ani gye ho no ho—ɔhaw kɛse betumi afi mu aba. Dɛn nti na ɛte saa? Wobɛyɛ dɛn ahwɛ wo ho yiye na wɔannaadaa wo?
Asiane Ahorow a Efi Nnaadaa Mu Ba
Nsɛm asekyerɛ nhoma bi ka sɛ, sɛ́ wɔbɛdaadaa obi no kyerɛ sɛ “wɔbɛma wagye atosɛm atom sɛ ɛyɛ nokware.” Ɛsan kyerɛ nso sɛ “wɔbɛhyɛ obi ma wagye nsusuwii anaa gyidi bi a ɛmma onhu nokwasɛm a ɛsɛ sɛ ohu, ɛma n’adwene tu fra anaasɛ ontumi nhu nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ atom.” Adwene titiriw a ɛwɔ asɛmfua no ne nsɛmfua foforo te sɛ “bradato” ne “nsisi” mu ne sɛ, wɔbɛdaadaa obi ma wafom kwan. Nokwasɛm ne sɛ, obi a onnim sɛ wɔka atosɛm kyerɛ no na amma ‘wanhu nokwasɛm a ɛsɛ sɛ ohu, n’adwene atu afra anaa wantumi anhu nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ’ no wɔ asiane kɛse mu.
Awerɛhosɛm ankasa a ɛwom ne sɛ, obi a wɔdaadaa no taa kura ne gyidi mu denneennen ɛmfa ho sɛ onya adanse a edi mu a ɛkyerɛ sɛ nea ogye di no nyɛ nokware no. Ebia ofi komam de ne ho afam ne gyidi no ho araa ma ɔrennye adanse biara a ebetumi akyerɛ sɛ nea ogye di no nyɛ nokware no ntom.
So Yɛwɔ Asiane Bi Mu?
Wubetumi abisa sɛ: ‘Sɛ wɔka sɛ wobetumi adaadaa yɛn nyinaa wɔ yɛn nyamesom mu gyidi ahorow ho a, na wɔregugu nsɛm mu anaa?’ Dabi, ɛnte saa. Efisɛ Satan Ɔbonsam a Yesu frɛ no “atoro agya no” asi ne bo sɛ ɔbɛdaadaa yɛn nyinaa. (Yohane 8:44) Wɔka Satan ho asɛm wɔ Bible mu nso sɛ “wiase yi nyame.” ‘Wafura nnipa ɔpepem pii adwene ani’ wɔ abakɔsɛm mu nyinaa. (2 Korintofo 4:4) Mprempren mpo, “ɔredaadaa asase sofo nyinaa.”—Adiyisɛm 12:9.
Efi abakɔsɛm mfiase pɛɛ na Satan fii ase daadaa adesamma. Sɛ nhwɛso no, ɔdaadaa Hawa ma ogye dii sɛ ɔnhyɛ ne Bɔfo mmara ase na obetumi ‘ayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne,’ a nea ɛkyerɛ ne sɛ obetumi asi nea ɛyɛ papa ne nea ɛyɛ bɔne ho gyinae. (Genesis 3:1-5) Ɛno yɛ nnaadaa kɛse a edi kan, na ɛwom mpo sɛ wɔde hokwan maa nnipa sɛ wɔmpaw nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ de, nanso wɔammɔ wɔn sɛ wɔnkyerɛ nea ɛyɛ papa ne nea ɛyɛ bɔne. Sɛ́ Ɔbɔadeɛ ne Otumfoɔ no, Onyankopɔn ankasa na ɔwɔ saa hokwan ne tumi a wɔde kyerɛ nea ɛyɛ papa ne nea ɛyɛ bɔne. (Yeremia 10:23; Adiyisɛm 4:11) Hwɛ nnaadaa a ɛyɛ sɛ yebegye adi sɛ hokwan a yɛwɔ sɛ yɛpaw nea ɛyɛ papa ne nea ɛyɛ bɔne no kyerɛ sɛ yɛwɔ hokwan sɛ yɛkyerɛ nea ɛyɛ papa ne nea ɛyɛ bɔne! Awerɛhosɛm ne sɛ, sɛ nnipa a yɛtɔ sin no, yɛtɔ afiri a ɛte saa mu ntɛm.
So Wobetumi Adaadaa Wo?
Ebetumi aba sɛ wo nyamesom mu gyidi ahorow a w’ani gye ho no adi mfe bebree, ebia atena hɔ fi wo nananom bere so. Nanso ɛno nkyerɛ ankasa sɛ ɛyɛ nokware. Dɛn ntia? Bible kyerɛwtohɔ kyerɛ sɛ bere a Kristo asomafo no wui akyi pɛɛ no, mmarima atorofo bi sɔree wɔ Kristofo asafo no mu na wɔkyerɛkyerɛɛ nsɛm a ‘wɔakyinkyim no de twee asuafo no dii wɔn akyi.’ (Asomafo Nnwuma 20:29, 30) Wofi ahokokwaw kɛse mu de ‘adɛfɛdɛfɛsɛm ne nyansapɛ ne nnaadaa hunu a egyina nnipa atetesɛm ne wiase mu nneɛma so daadaa’ nkurɔfo.—Kolosefo 2:4, 8.
So nneɛma asesa nnɛ? Ɛnte saa ankasa, efisɛ ɔsomafo Paulo bɔɔ kɔkɔ sɛ nneɛma bɛkɔ so asɛe wɔ “nna a edi akyiri,” a ɛno ne bere a yɛwom yi mu. Ɔkyerɛwee sɛ: “Nnipa bɔne ne nnaadaafo bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔneyɛ mu, wɔbɛdaadaa afoforo na wɔn nso wɔadaadaa wɔn.”—2 Timoteo 3:1, 13.
Enti nyansa wom sɛ yɛfa ɔsomafo Paulo kɔkɔbɔ yi aniberesɛm: “Enti nea odwen sɛ ogyina hɔ no nhwɛ yiye na wanhwe ase.” (1 Korintofo 10:12) Nokwarem no, na Paulo reka obi gyinabea wɔ Onyankopɔn anim ho asɛm. Nokwasɛm ni, sɛ wususuw sɛ Satan rentumi nnaadaa wo a, ɛno ankasa mpo yɛ nnaadaasɛm kɛse. Obiara nni hɔ a Satan “nnɛɛdɛe” no rentumi nnya no. (Efesofo 6:11) Ɛno nti na ɔsomafo no kyerɛe sɛ osuro ma ne mfɛfo Kristofo no sɛ ‘ɔkwan bi so no sɛnea ɔwɔ no de n’anitew daadaa Hawa no, saa ara na wɔn nso wɔbɛsɛe wɔn adwene afi nokwaredi ne kronnyɛ a ɛsɛ Kristo no ho.’—2 Korintofo 11:3.
Wobɛyɛ Dɛn Atumi Ahwɛ Wo Ho Yiye na Wɔannaadaa Wo?
Wobɛyɛ dɛn atumi ahwɛ wo ho yiye na Satan annaadaa wo? Wobɛyɛ dɛn ahwɛ ahu sɛ ‘wosom Onyankopɔn wɔ honhom ne nokware mu’? (Yohane 4:24) Fa nea Yehowa Nyankopɔn de ama wo no di dwuma. Nea edi kan no, wama wo “adwene” a ɛbɛma woatumi ahu atoro ne nokware mu nsonsonoe. (1 Yohane 5:20) Wama atumi ayɛ yiye sɛ wubehu Satan akwan. (2 Korintofo 2:11) Nokwasɛm ni, wama wo nea wuhia nyinaa a wode bɛko atia mmɔden a Satan bɔ sɛ ɔbɛdaadaa wo no.—Mmebusɛm 3:1-6; Efesofo 6:10-18.
Nea ehia sen biara no, Onyankopɔn ama wo biribi a edi mũ a wode bɛbɔ wo ho ban. Ɛyɛ dɛn ade? Ade koro no ara na ɔsomafo Paulo hyɛɛ ne yɔnko Timoteo nkuran sɛ ɔmfa ne ho nto so, wɔ nyamesom mu gyidi ho nsɛm mu no. Bere a ɔsomafo Paulo de “nnipa bɔne ne nnaadaafo” ho kɔkɔbɔ maa Timoteo wiei no, ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnko ntia wɔn, denam biribiara a ogye di a ɔde begyina “nkyerɛwee kronkron no” so no so—Onyankopɔn Asɛm kronkron a ɛne Bible no.—2 Timoteo 3:15.
Nokwarem no, ebinom bɛka sɛ wɔadaadaa obiara a ogye Onyankopɔn di na ogye Bible no tom sɛ Onyankopɔn Asɛm a efi honhom mu no. Nanso nokwasɛm ankasa ne sɛ, wɔn a wɔadaadaa wɔn no ne wɔn a wɔde mpiyɛ bu wɔn ani gu adanse nyinaa a ɛkyerɛ sɛ Ɔbɔadeɛ bi wɔ hɔ na Bible no yɛ Onyankopɔn Asɛm a wɔde ne honhom akyerɛw so no. *—Romafo 1:18-25; 2 Timoteo 3:16, 17; 2 Petro 1:19-21.
Sɛ anka wobɛma wɔde “nea wodi atoro frɛ no ‘nimdeɛ’” no adaadaa wo no, fa Onyankopɔn Asɛm no di dwuma fa hu nokware no. (1 Timoteo 6:20, 21) Yɛ w’ade te sɛ mmarima ne mmea a wɔwɔ adwempa a ɔsomafo Paulo kaa asɛm kyerɛɛ wɔn wɔ Beroia no. “Wɔde wɔn adwene nyinaa gyee asɛm no.” Ɛnyɛ sɛ wogyee nea ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ wɔn no dii kɛkɛ, na mmom “da biara na wɔhwehwɛ Kyerɛwnsɛm no mu yiye hwɛ sɛ nsɛm no te saa anaa.”—Asomafo Nnwuma 17:11.
Nsuro sɛ wobɛhwehwɛ wo gyidi mu wɔ saa kwan yi so. Nokwarem no, Bible no hyɛ wo nkuran sɛ ‘sɔ ade nyinaa hwɛ’ ansa na woagye atom sɛ ɛyɛ nokware. (1 Tesalonikafo 5:21) Ɛrekɔ afeha a edi kan Y.B. awiei no, ɔsomafo Yohane hyɛɛ ne mfɛfo Kristofo nkuran sɛ: “Adɔfo, munnnye honhom mu nsɛm nyinaa nnni, na mmom monsɔ honhom mu nsɛm no nhwɛ sɛ efi Onyankopɔn anaa.” (1 Yohane 4:1) Yiw, ɛwom mpo sɛ ɛte sɛ nea nyamesom nkyerɛkyerɛ bi “fi Onyankopɔn honhom mu”—anaasɛ efi Onyankopɔn hɔ de—nanso ɛda so ara yɛ ade a nyansa wom sɛ yɛbɛhwehwɛ Kyerɛwnsɛm no mu ahu sɛ ɛyɛ nokware ansa na yɛagye atom.—Yohane 8:31, 32.
Fa Nea Wusua no Di Dwuma
Nanso pii ho hia sen saa. Osuani Yakobo kyerɛw sɛ: “Monyɛ asɛm no yɛfo, na monnyɛ atiefo nko mfa nsusuwii hunu nnaadaa mo ho.” (Yakobo 1:22) Nea Bible no kyerɛkyerɛ a wubehu no nkutoo nnɔɔso. Ɛsɛ sɛ wode di dwuma. Ɔkwan bɛn so? Ɛdenam nea Onyankopɔn ahyɛ wo sɛ yɛ a wobɛyɛ ne nneɛma a ɔbara a worenyɛ no so.
Sɛ nhwɛso no, hwɛ ɔbrasɛe a atwa yɛn ho nyinaa ahyia. So ɛno mma wunhu sɛnea Satan atumi adaadaa nkurɔfo ma wɔanya adwene sɛ wobetumi abu Onyankopɔn mmara a ɛfa abrabɔ ho no so a ɔhaw biara remfi mu mma? Esiane eyi nti, ɔsomafo Paulo de kɔkɔbɔ a emu da hɔ yi maa Kristofo sɛ: “Mommma wɔnnnaadaa mo: Onyankopɔn nyɛ obi a wosi no atwetwe. Na nea onipa gu no, ɛno ara na obetwa.”—Galatifo 6:7.
Nyɛ te sɛ “ɔkwasea” a Yesu kaa ne ho asɛm sɛ “ɔte” ne nsɛm “na ɔnyɛ” no. Te sɛ Don Quixote a Cervantes kaa ne ho asɛm, a n’adwene daadaa no no, wɔdaadaa saa onipa no efisɛ osusuw sɛ obetumi asi ne fie a ɛwɔ ahoɔden asi fapem a ɛyɛ anhwea so. Mmom no, yɛ te sɛ ɔbarima a “osii ne fie sii ɔbotan so” no. Yesu frɛɛ ɔbarima yi “ɔbadwemma” efisɛ ‘ɔte Yesu nsɛm yi na ɔyɛ.’—Mateo 7:24-27.—w10-E 09/1.
^ nky. 18 Sɛ wopɛ ɛho nsɛm pii a, hwɛ Is There a Creator Who Cares About You? ne The Bible—God’s Word or Man’s? nhoma a Yehowa Adansefo tintimii no mu.
[Adaka/Mfonini wɔ kratafa 30, 31]
So Wuhu Nneɛma Sɛnea Ɛte Ankasa?
Wɔ 1930 mfe no mu no, Sweden mfoniniyɛfo a ne din de Oscar Reutersvärd yɛɛ mfonini ahorow bi a wɔfrɛ no borɔfo mu sɛ impossible figures (mfonini a ɛdaadaa nnipa), na ɔyɛɛ no nhoma. Nnɛyi nhwɛso na ɛwɔ benkum so no. Sɛ w’ani bɔ mfonini ahorow yi so pɛ a, wuhu no te sɛ nea ɛyɛ biribi a ɛwɔ hɔ ankasa ho mfonini. Nanso, sɛ wɔhwɛ no yiye a, ɛyɛ mfonini a nea ɔyɛe no de ma wɔn a wɔhwɛ no adwene tu fra anaasɛ ɛdaadaa wɔn.
Ɛnyɛ mfonini yi nkutoo ne ade a etumi daadaa nnipa. Bible no bɔɔ kɔkɔ wɔ bɛyɛ mfe mpem abien a atwam ni no mu sɛ: “Monhwɛ yiye: anhwɛ a obi de nyansapɛ ne nnaadaa hunu a egyina nnipa atetesɛm ne wiase mu nneɛma so a ennyina Kristo so bɛfa mo nnommum.”—Kolosefo 2:8.
Nea ɛma saa kɔkɔbɔ yi yɛ aniberesɛm ne sɛ na nea ɔkyerɛw saa nsɛm no ankasa yɛ obi a wɔadaadaa no pɛn. Esiane sɛ wɔkyerɛkyerɛɛ no wɔ nyamesom akyerɛkyerɛfo a wɔagye din paa no mu biako nan ase na ɔne nnipa a wɔwɔ dibea a ɛkorɔn na ɛbɔ nti, na ɔnyɛ obi a ɛyɛ mmerɛw sɛ wɔbɛdaadaa no.—Asomafo Nnwuma 22:3.
Na wɔama ɔbarima yi—Saul a ofi Tarso—agye adi sɛ obiara a onnye ɔno Saul nyamesom mu atetesɛm ne amanne nni no rennya nkwa. Esiane sɛ Yudafo akannifo no maa no tumi nti, obuu no sɛ Onyankopɔn ama no adwuma sɛ ɔntaa obiara a ɔmpa ne Kristofo gyidi. Ɔboae mpo ma wokum ne man muni bi a wotwaa asɛm too no so sɛ ɔka abususɛm.—Asomafo Nnwuma 22:4, 5, 20.
Bere bi akyi no, wɔboaa Saul ma ohuu nsonsonoe a ɛda nea ɛteɛ ne nea ɛnteɛ, nea Onyankopɔn pene so ne nea ɔmpene so ntam. Bere a Saul, saa ɔbarima a ɔyɛ nnam yi hui sɛ wadi mfomso pɛ, ɔsakraa n’akwan na wɔbɛfrɛɛ Paulo, Yesu Kristo somafo. Wɔannaadaa Paulo bio, ohuu nokware kwan a wɔfa so som Onyankopɔn.—Asomafo Nnwuma 22:6-16; Romafo 1:1.
Te sɛ Paulo no, wɔde nkyerɛkyerɛ a ɛte sɛ mfonini a ɛdaadaa nnipa—gyidi horow a ɛte sɛ nea ntease wom nanso ennyina Onyankopɔn nsɛm so no daadaa nnipa komapafo pii. (Mmebusɛm 14:12; Romafo 10:2, 3) Afei wɔaboa wɔn ma wɔahu sɛnea wɔn gyidi ahorow ne aba a wɔn nyamesom sow te ankasa. (Mateo 7:15-20) Bere a wonyaa Bible mu nokware nimdeɛ no, wɔsakraa wɔn gyidi ne wɔn asetena kwan sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya Onyankopɔn anim dom.
So wobɛpɛ sɛ wusuasua ɔsomafo Paulo nhwɛso no na wugyina Onyankopɔn Asɛm Bible no so hwehwɛ wo gyidi ahorow mu? Yehowa Adansefo ani begye ho sɛ wɔbɛboa wo.
Share Share Hwɛ Yiye na Wɔannaadaa Wo
w10 10/1 kr. 29-32
Dɛn Nti Na Nnipa Yɛ Nneɛma Bɔne?
Nneɛma Bɔne Bɛba Awiei!
Sɛnea Wobɛboa W’adamfo a Ɔyare
NEA ƐMA ABUSUA NYA ANIGYE Nea Wobɛyɛ na W’aware Angu wɔ Afe a Edi Kan no Mu
NEA ƐMA ABUSUA NYA ANIGYE Sɛnea Wobɛtete Mmofra Ma Wɔadi Wɔn Asɛyɛde Ho Dwuma
Nneɛma Ason a Ɛbɛma Yɛanya Bible Akenkan So Mfaso
Akunafo—Dɛn Na Wohia? Wobɛyɛ Dɛn Aboa Wɔn?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN October 2010
Share Share ƆWƐN-ABAN October 2010
ƆWƐN-ABAN October 2010